အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: ETABS ရဲ့ ခရီးကို အစကောက်ခြင်း
ETABS ရဲ့ ခရီးကို အစကောက်ခြင်း
ETABS ဟာ http://www.csiberkeley.com/ က နေ ထုတ်တဲ့ Structural Software တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်..
Extended 3D Analysis of Building System (ETABS) software ကို 1975 ခုနှစ်လောက်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Computer & Structural Inc.(CSI) မှ Structural & Earthquake Engineering အတွက် ရေးသားထုတ်ဝေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။INTEGRATED ANALYSIS, DESIGN AND DRAFTING OF BUILDING SYSTEMS အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ETABS ကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ လောက်မှာ Major project ကြီးတွေ အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်... အခုဆိုရင် ETABS ရဲ့ ခရီးဟာ Version 9.5 အထိကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်..။
ETABS ကို ထုတ်ဝေပြီးတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်အတွင်းမှာ ETABS ဟာ structural & earthquake design အတွက် Industry standard for Building Analysis and Design Software အဖြစ် နိုင်ငံတကာကနေ အသိအမှတ် ပြုခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်..။
ETABS ဟာ graphical user interface အပေါ်မှာ အခြေတည်ပြီး... Structure တစ်ခုလုံးကို Model တည်ဆောက်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးထားပါတယ်..။
ETABS ရဲ့ Model လုပ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေကတော့-
1) Moment Resisting Frames
2) Braced Frames
3) Staggered Truss Systems
4) Frames with Reduced Beam Sections or Side Plates
5) Rigid and Flexible Floors
6) Sloped Roofs
7) Ramps and Parking Structures
8) Mezzanine Floors
9) Multiple Tower Buildings and Stepped Diaphragm Systems with Complex Concrete
10) Composite or Steel Joist Floor Framing Systems များ ဖြစ်ပါတယ်....
Analysis Solutions များထုတ်ရာမှာ ရှုတ်ထွေးနိုင်တဲ့ Panel Zone Deformationsများ၊ Diaphragm Shear Stressesများနဲ့ Construction Sequence Loading များကို fingertips များ ထုတ်ပေးထားပါတယ်..